ယောက်ျားက မင်းကိုမချစ်တဲ့အခါ သူဘယ်လိုပြုမူနေသလဲ။ စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 26/05/2022 18:15 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, စုံတွဲနှင့်လိင်
ခဏလောက်ကြည့်ဖူးလား။ မင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးက အဆင်မပြေဘူးလား။ ယိုယွင်းလာပြီး အကြောင်းရင်းကို ရှာမတွေ့ဘူးလား။ သင့်လက်တွဲဖော်သည် ထပ်တူမခံစားရတော့ဘဲ ၎င်းသည် အချို့သောအပြုအမူများအတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားက မင်းကို မချစ်ရင် သူဘယ်လို ဆက်ဆံမလဲ။
ဒီလိုကိစ္စတွေမှာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဗီဇကို အားကိုးပြီး နိမိတ်လက္ခဏာများကို ယုံကြည်ပါ။. သို့သော် မသေချာမရေရာသောတိမ်တိုက်များက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်စေမည့်လမ်းကို ဟန့်တားလိုက်သောအခါတွင် အဆိုပါလက္ခဏာများစွာ လွှမ်းသွားပါသည်။ ပထမဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်းထန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များမချမီ သင့်အား တစ်စုံတစ်ရာလွှမ်းမိုးမှုမခံရအောင် ကြားနေဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ကောင်းစွာဂရုစိုက်ရပါမည်။
1 သူ မင်းကို မချစ်ဘူးလို့ မင်းဘာလို့ ခံစားရတာလဲ။
2 ယောက်ျားက မင်းကိုမချစ်တော့ရင် သူဘယ်လိုပြုမူနေလဲ။
2.1 သူက မင်းကို အရင်ကလို မယုံဘူး။
2.2 မင်း သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေလို့မကောင်းဘူး။
2.3 အမြဲတမ်း စိတ်တိုနေတတ်တယ်။
2.4 မင်းအတွက် ဘယ်တော့မှ အချိန်မရှိဘူး။
2.5 မင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ဦးစားပေး မဟုတ်တော့ဘူး။
2.6 အနာဂတ်အစီအစဥ်တွေ ပျက်ကုန်ပြီ။
သူ မင်းကို မချစ်ဘူးလို့ မင်းဘာလို့ ခံစားရတာလဲ။
သူ မင်းကို မချစ်တော့ဘူးလို့ အထောက်အထားတွေ ရှိလာတဲ့အခါ အဲဒါထက် ပိုသိသာနိုင်တယ်။ သို့သော်၊ တခါတရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအရာဖြစ်ခြင်းရှိ၊ မရှိ သိရန် ပဟေဌိဖြစ်နေပါသည်။ သင်ဟာ သိပ်ကို ကောက်ကြောင်းဆန်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပြီး သဲလွန်စမပေးတတ်ပါဘူး။
ယေဘုယျအားဖြင့် ပထမဆုံး သတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ ဥပေက္ခာ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ချစ်ခင်ကြင်နာမှုပြသမှုများသည် ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။ သူ့သဘောထားက ချစ်ခင်မှုနည်းတယ် ဒါမှမဟုတ် အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေက အားနည်းနေပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ယောက်ျားက မင်းကိုမချစ်တော့ရင် သူဘယ်လိုပြုမူနေလဲ။
အသေးစိတ်အချက်များ များစွာရှိနိုင်ပြီး အများအားဖြင့် ထူးခြားသည်မှာ မည်သည့်အချိန်တွင် ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ အရေးကြီးဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာ မင်းကို မပါဝင်တော့ဘူး။. ပန်းတိုင်တွေရှိတဲ့အခါ၊ အနည်းဆုံးတော့ အရေးကြီးတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့ အမြဲတိုင်ပင်တယ်။
သူက မင်းကို အရင်ကလို မယုံဘူး။
ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းသည် လက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. လူတစ်ဦးသည် ရိုးသားသောအခါတွင်၊ သူသည် အခြားလူတစ်ဦးအပေါ်တွင် ချစ်ခင်မှုနှင့် ယုံကြည်မှု အမြဲရှိသည့်အပြင်၊ ထိုသို့သော ရင်းနှီးမှုနှင့် လုံခြုံမှုမရှိလျှင် ဆက်ဆံရေးကို အချိန်နှင့်အမျှ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
မင်း သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေလို့မကောင်းဘူး။
ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းကို ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူ့အနားမှာရှိနေတဲ့အခါ အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပါ။ သက်သာတယ်လို့ မခံစားရဘူးလား၊ သင့်မှတ်ချက်များသည် အပြုသဘော သို့မဟုတ် ကျေနပ်စရာမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သူ မပျော်ရင် သူ့ကုမ္ပဏီကို မပျော်ဘူး ဒါပေမယ့် တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်တတ်တယ်၊ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အဆင်မပြေတော့ဘူး။ သင့်တွင်ရှိသော မှတ်ချက်များသည် အပြုသဘောဆောင်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘဲ ဆက်ဆံရေးတစ်ခု တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိသည်မှာ သေချာပါသည်။
မှတ်ချက်များသည် အပြုသဘောမဆောင်သည့်အခါ၊ အခြားအရာအားလုံးသည် အဆိပ်အတောက် ရောင်ဝါကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ သေချာတယ်။ ရှင်းပြချက်အားလုံးသည် အပျက်သဘောဆောင်သည်။ ဆွေးနွေးမှုကို နှိုးဆော်ရန်။ အကယ်၍ သူသည် သင်နှင့် အတူရှိနေချိန်၌သာ စိတ်ဆိုးနေပါက၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲကို ရှာတွေ့ဖို့ ကြိုးစားပါ။၊ ကောင်းသောလက္ခဏာမဟုတ်ပါ။
ဆွေးနွေးမှုတွေက ဘယ်တော့မှ မကောင်းဘူးဆိုတာ မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ အရင်ကထက်စာရင် ဆွေးနွေးမှုအချို့ရှိခဲ့ရင် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ရန်ဖြစ်စရာမရှိတော့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပဋိပက္ခများ တည်ရှိနေခြင်းသည် ဆိုးရွားသော လက္ခဏာတစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်သည်၊ ဆက်ဆံရေးတစ်ခု ရှင်သန်ကြီးထွားလာစေရန်အတွက် တစ်ဖက်သားကို ကြီးထွားလာစေရန်အတွက် သဘောထားကွဲလွဲမှုအချို့ကို အခါအားလျော်စွာ ပြသရမည်ဖြစ်သည်။
မင်းအတွက် ဘယ်တော့မှ အချိန်မရှိဘူး။
နောက်လက္ခဏာကတော့ ဘယ်အချိန်လဲ။ သူသည် သင်နှင့်အတူရှိရန် အချိန်မရှိပါ။. လိုအပ်ပါက၊ သင်တောင်းဆိုပါက၊ အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်လိုပါက ၎င်းမလာပါက၊ ၎င်းသည် စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိခြင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်တူပါသည်။ သေချာတယ်။ မင်းအနားကို မလာဖို့ အကြောင်းပြချက် တစ်ခုခုပေးမင်းကိုအမြဲတွေ့ချင်နေတဲ့လူက မင်းဘေးနားမှာရှိဖို့ ဖြစ်နိုင်သမျှအကုန်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။
မင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ဦးစားပေး မဟုတ်တော့ဘူး။
သေချာနေပြီ။ မင်းနဲ့အတူနေဖို့ အားမကိုးဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း။ အတူတူ အချိန်ပိုတောင်းလာတဲ့အခါ စိတ်ဆိုးစေမယ့်အချိန်တွေတောင် ရှိပါသေးတယ်။ တောင်းစားနေသလို ခံစားရတယ်။
လည်ပတ်မှုတစ်ခုစီကြားတွင် နေရာပိုများလာသည်။ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင်ပင် ပျောက်သွားပြီး အမြဲတမ်း အလုပ်များနေပါသည်။ သူ့မျက်နှာကို ပစ်လိုက်တဲ့အခါ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေ ရှိနိုင်သလို ဖြစ်ပျက်နေတာကို သူ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။
အဲဒီအစီအစဥ်တွေကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ မေ့နေကြပြီ။. အတူတူ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါက အနာဂတ် ကလေးများအကြောင်း ပြောဆိုခြင်း နှင့် အချို့သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ မျှဝေခြင်း မရှိတော့ပါက ဆက်ဆံရေး အေးစက်သွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပြီး မင်းအကြောင်းပြောဖို့ကြိုးစားရင် သူ ဒေါသထွက်ပြီး အဲဒါက သင့်ကို စိတ်ပျက်စေလိမ့်မယ်။
ပျက်ပြားသွားတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဦးတည်သွားစေနိုင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖော်ပြပြီးသား၊ စိတ်ဝင်စားမှုကတော့ ဒီစီးရီးရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေပါ။. နမူနာသည် ၎င်းကို အလုံးစုံလုပ်ဆောင်ပြီး ရှုထောင့်အားလုံးတွင် ဝှက်ထား၍မရနိုင်သည်မှာ သေချာပါသည်။ အားလုံးထက်၊ သင်လုပ်ရမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေချာကြည့်အကယ်၍ ၎င်းသည် သင့်အား ဆိုးရွားပြီး အထူးအဆန်းမဟုတ်ဟု အမှန်တကယ်ခံစားရပါက၊ ထိုသူသည် သင့်အား ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို တန်ဖိုးမထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စိတ်ပါဝင်စားမှုနဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ရှုထောင့်တွေကြားက မင်းရဲ့တစ်နေ့တာ ဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့တယ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုအတွက် မင်းကို အားကိုးဖို့၊ မင်းကို အချိန်မရွေးတွေ့ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒကိုပြသဖို့နဲ့ မင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေကို အဆိုးမြင်တဲ့အဖြေတွေနဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့အဖြေတွေနဲ့ မြှင့်တင်ဖို့တောင် အမြဲတမ်း၊ မေတ္တာနှင့် ပံ့ပိုးမှု တိုးပွားစေရန်။ အကယ်၍ ဤအဓိက အရင်းအမြစ်များ ပျက်ကွက်ပါက၊ သူက သင့်ကို အမှန်တကယ် မချစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » ယောက်ျားက မင်းကို မချစ်တဲ့အခါ သူဘယ်လို အပြုအမူလဲ။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို မိန်းမနဲ့ ချိတ်တာ ဘာလဲ။